अमेरिकामा बस्ने आशामा विमानमा झु,ण्डिएर उडे १७ वर्षका किशोर ! – Dainik Sangalo
अमेरिकामा बस्ने आशामा विमानमा झु,ण्डिएर उडे १७ वर्षका किशोर !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र ०३, २०७८ समय: १७:०८:३१
काठमाडौं। अफगानिस्तानमा ता,लिबानको नि,यन्त्रण कायम भएसँगै यहाँको माहोल अ,स्त,व्यस्त छ । सामाजिक संजालमा यस्ता कैयौं भिडियो भाइरल भएका छन् जसमा तालिबानी नागरिकलाई काबुल विमानस्थलमा भा, x गि, रहेको देख्न सकिन्छ । तालिबानको ड, रले यी मानिसहरु जसरी भए पनि आफ्नो देशबाट निस्किने कोसिस गरिरहेका थिए । यस्तै एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो जसमा अमेरिकी सेनाको एक विमानबाट एक व्यक्ति ख, x सेको देख्न सकिन्छ ।
हवाइजहाजबाट ख, x स्ने यी किशोर केवल १७ वर्षका थिए । १७ वर्षका किशोर रेजा आफ्ना १६ वर्षका भाइ कबीरसँग भा, x गे,र काबुल एयरपोर्ट पुगेका थिए । अमेरिकीविमानबाट ख, x सेका रेजाको शव परिवारले पाइसकेका छन् तर उनका भाइ कबीरका विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । खासमा यी दुई किशोरहरुले अफगानिस्तानबाट २० हजार जनालाई अमेरिका वा क्यानडा लगिने थाहा पाएका थिए । तालिबानी राजसँग ड, रा,एका उनीहरु आफ्नो भाग्य परीक्षण गर्न एयरपोर्ट पुगेका थिए ।
भाइस न्युजसँग कुरा गर्दै रेजाको परिवारका एक सदस्यले उनी कसैलाई नबताइ भा, गेको बताए । ती आफन्तका अनुसार रेजाले आफ्नो परिचय पत्र घरबाट उठाएर एयरपोर्टतिर गएका थिए । उनी तालिबान राजमा रहन चाहँदैनथे । अमेरिकी सैन्य विमान सी–१७ एयरक्राफ्ट काबुल विमानबाट उड्ने बेला त्यहाँ निकै ठूलो भि, ड भएको थियो । रिपोर्टका अनुसार यो विमानबाट ख, x सेर ३ जनाको मृ, x त्यु भएको छ ।
रेजा र कबीरसहित उनीहरु ६ जना दाजुबहिनीहरु थिए । रेजा र कबीर सबैभन्दा ठूला थिए । अफगानिस्तानका यो उमेरका युवाले १९९६ देखि २००१ सम्म तालिबानको राज देखेका थिएनन् तर उनीहरुले यो कट्टरपन्थी समूहको रा,जमा हुने गरेका क,डाइबारे परिवारबाट सुन्दै आएका थिए । अफगानिस्तानको युवा पिढी आफ्नो स्वतन्त्रता खो, x सिएको हेर्न चाहँदैनथे ।
रेजाको परिवारका एक सदस्यका अनुसार उनलाई नयाँ नयाँ कपडा लगाउने, बक्सिङ खेल्ने र सामाजिक संजाल चलाउने सोख थियो । अरु अफगानीहरुजस्तै उनी पनि ड, राएका थिए । अफगानिस्तानमा तालिबान राजलाई लिएर सबैभन्दा बढी महिलाहरु ड, राएका छन् । १९९६ देखि २००१ सम्म तालिबानले आफ्नो शासनकालमा महिलाहरुमाथि कैयौं प्र, तिबन्ध लगाएका थिए । त्यतिबेला महिलाहरु घरबाहिर एक्लै निस्किन, घरबाहिर काम गर्न वा पढ्न प्र, तिबन्ध थियो ।
Last Updated on: August 19th, 2021 at 5:08 pm